လက်ကားအမျိုးမျိုးသောဖိအားစီးဆင်းမှုမီတာထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်း | ANGJI
1. ကြည်လင်ပြတ်သားသောကြည်လင်ပြတ်သားသည့်တရုတ်အက္ခရာများ, ပြသ, အလိုလိုသိလွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးပြန်လည်စတင်;
အမျိုးမျိုးသောဖိအားစီးဆင်းမှုအာရုံခံကိရိယာ (ဥပမာ orifice plate၊ V-cone၊ Annubar, elbow နှင့်အခြား differential pressure pressure sensors) နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သလား။
4. အပူချိန် / ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ interface ကို, ခိုင်မာသောလဲလှယ်နိုင်သည်။ Pt100 သို့မဟုတ် Pt1000 နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ ဖိအားကို gauge ဖိအားသို့မဟုတ်အကြွင်းမဲ့ဖိအားအာရုံခံကိရိယာနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးကဏ္inများတွင်ပြုပြင်နိုင်သည်။ (optional);
မီဒီယာအမျိုးမျိုးကိုတိုင်းတာခြင်း၊ ရေ၊ ရေ၊ ဓာတ်ငွေ့စသည်ဖြင့်တိုင်းတာနိုင်သည်။
အလွန်ကောင်းမွန်သော nonlinear correction function နှင့်အတူ, တူရိယာရဲ့ linear တိုးမြှင့်;
၇.၁ အချိုးဟာ ၁း၁၀၀ (အထူးလိုအပ်ချက်များ ၁: ၂၀၀) ဖြစ်နိုင်တယ်။
Full-featured HART protocol, ဝေးလံခေါင်သီ parameter သည် setting ကိုနှင့် debugging နှင့်အတူ; (optional);
၉။ converter သည် frequency pulse,4~ 20mA Analog signal ကို output လုပ်နိူင်ပြီး RS485 interface ကိုလည်းကွန်ပျူတာနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိူင်တယ်။ (optional);
၁၀။ ဘာသာစကားရွေးချယ်နိုင်သည်၊ တရုတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်လိုပုံစံနှစ်ခုရှိသည်။
၁၁။ သတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ရန်အဆင်ပြေသည်၊ အမြဲတမ်းသိမ်းဆည်းနိုင်သည်၊ သုံးနှစ်အထိသမိုင်းအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအလွန်နည်းပါးပြီးခြောက်သွေ့သောဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအနည်းဆုံး (၃) နှစ်ကြာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
13.The အလုပ် mode ကိုအလိုအလျောက် switched နိုင်ပါတယ်, ဘက်ထရီ -power, နှစ်ခု - ဝါယာကြိုးစနစ်;
14. ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်၊ ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရန်အချက်အလက်များ၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်ခြင်းများ၊
၁၅။ သီးခြားလွတ်လပ်သောစကားဝှက်ချိန်ညှိချက်များဖြင့် anti-theft function သည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး parameter များ၊ စုစုပေါင်းပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်စံကိုက်ညှိခြင်းတို့သည်ကွဲပြားသောစကားဝှက်များကိုသတ်မှတ်နိုင်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသောစီမံခန့်ခွဲမှု၊
16. ပြသခြင်းယူနစ်ကိုရှေးခယျြနိုငျ, စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်;
အလုပ်ပါဝါ အေပါ ၀ င်မှု - ၂၄VDC + ၁၅%၊ ၄ မှ ၂၀ မီတာထုတ်လွှတ်မှု၊ Pulse output၊ alarm output၊ RS-485 စသည်တို့အတွက်
စက်တစ်ခုလုံး၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု အေပြင်ပပါဝါထောက်ပံ့ရေး: <2W
စက်တစ်ခုလုံး၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု အေကြိမ်နှုန်း၊ 0-1000HZ output၊ သက်ဆိုင်ရာချက်ချင်းစီးဆင်းမှု၊ ဤ parameter သည် 20V ထက်ပိုသော buttonhigh level နှင့် 1V ထက်နည်းသောနိမ့်သောအဆင့်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
အေကြိမ်နှုန်း၊ 0-1000HZ output၊ သက်ဆိုင်ရာချက်ချင်းစီးဆင်းမှု၊ ဤ parameter သည် 20V ထက်ပိုသော buttonhigh level နှင့် 1V ထက်နည်းသောနိမ့်သောအဆင့်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
RS-485 ဆက်သွယ်ရေး (photoelectric isolation) RS-485 interface ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အိမ်ရှင်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အဝေးထိန်း display နှစ်ခု၊ အလယ်အလတ်အပူချိန်၊ ဖိအားနှင့်စံအသံအတိုးအကျယ်စီးဆင်းမှုနှင့်စုစုပေါင်းအသံအနိမ့်အမြင့်ပြီးနောက်အပူချိန်နှင့်ဖိအားလျော်ကြေးတို့နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဆက်စပ်မှု4~ 20mA စံလက်ရှိအချက်ပြ (photoelectric isolation) နှင့် standard volume သည်သက်ဆိုင်ရာ 4mA,0m3 / h၊ အမြင့်ဆုံး standard volume နှင့်သက်ဆိုင်သော 20 mA (တန်ဖိုးကို level menu တွင်သတ်မှတ်နိုင်သည်)၊ သို့မဟုတ်သုံးဝါယာကြိုး, အ flowmeter အလိုအလြောကျလက်ရှိမှန်ကန်သောနှင့် output ကိုအညီဖြည့်စွက် module ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်
ရှေ့သို့ Volume ကို Corrector
နောက်တစ်ခု: XJXW စီးရီးစီးဆင်းမှုမီတာ
differential ကိုဖိအား Flow ထုတ်လွှင့်